ပါ၀င်ခြင်း | FLEGT
VPA မှ ပါ၀င်ခြင်းကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သလဲ
ပါဝင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ပြည်သူလူထုသည် ၎င်းတို့အပေါ်သက်ရောက်သည့် မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပါဝင်မှုအတိုင်းအတာများသည် မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်း အသိ ပေးရုံ အလွန်ရိုးရှင်းသည့်အဆင့်မှ ပြောဆိုခွင့်နှင့် ရလဒ်များကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည်အထိပါဝင်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကို မျက်စိထဲတွင် မြင်ယောင်လာရန် ဖော်ပြသည့်နည်းတစ်နည်းမှာ လှေကားတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး လှေကားတစ်ဆင့်ချင်းစီသည် အောက်အဆင့်ထက် အထက်ကိုရောက်လေလေ ပါဝင်မှုအတိုင်းအတာ ပိုမိုများပြားလာလေလေဖြစ်သည်။
ပုံ ၉။ပါဝင်ခြင်း လှေကား။ Adapted from Arnstein, S.R. 1969. A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners 35: 216–224.
ပါဝင်ခြင်းသည် ကောင်းမွန်သောသစ်တောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်၏ အရေးကြီးသောရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများကို ၎င်းတို့အပေါ်သက်ရောက်သည့် ဆုံးဖြတ် ချက်များချမှတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်ရန်ထောက်ကူပါသည်။ ပါဝင်ခြင်းသည် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများအကြား ကျယ်ပြန့်သောအများဆန္ဒများကို ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေသည့် လက်တွေ့လုပ်ကိုင်နိုင်သော၊ သာတူညီမျှဖြစ်သောနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို သူတို့ကို ပို၍ ရနိုင်ဖွယ်ရှိစေခြင်းအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း အကျိုးရှိစေပါ သည်။
ပါဝင်ခြင်းသည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်အဖွဲ့များအကြား အငြင်းပွားမှုများကို လျှော့ချပေးပြီး ယုံကြည်မှု ကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။ ယခင်က ဆိုးဝါးသောဆက်ဆံရေး များရှိခဲ့သည့် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သည့် အဖွဲ့များအကြား ဆက်ဆံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေခြင်းဖြင့် ပါဝင်ခြင်းသည် မူ၀ါဒ ရေးဆွဲရာတွင် ပိုမိုသာတူညီမျှဖြစ်လာစေရန် မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
သို့ရာတွင် ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက် (VPA) ဆွေးနွေးခြင်း များမတိုင်မီ သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံများအတွင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူပါဝင်ခြင်းသည် ရှားပါးပါသည်။ အထူးသဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတွက် သစ်တော သယံဇာတများကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး အသုံးပြုနေသည့် ရပ်ရွာလူမှုအဖွဲ့အစည်းများသည် သစ်တောများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းမှ ချန်လှပ်ခံခဲ့ရပါသည်။
VPAs မှ ပါဝင်ခြင်းကိုမည်ကဲ့သို့တိုးမြှင့်စေပါသနည်း။
VPA လုပ်ငန်းစဉ်များသည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူပါဝင်ခြင်းအတိုင်းအတာ နှင့် လွှမ်းမိုးမှု အဆင့်တွင် မကြုံစဖူးဖြစ်နေပါသည်။ VPA လုပ်ငန်းစဉ်များသည် VPA လုပ်ငန်းစဉ်ကိုယ်တိုင်အတွင်းနှင့် ပါဝင်သည့်အဖွဲ့များမှVPA စာသားနှင့်နောက်ဆက်တွဲများတွင် ပြုလုပ်ထားသည့်ကတိကဝတ်များ ၏ရလဒ် နှစ်ခုလုံးအနေဖြင့်ပါ ပါဝင်ခြင်းကိုမြှင့်တင်ပေးပါသည်။
VPAs များသည် အလွှာစုံပါ၀င်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည့် ပထမဆုံးကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပြီး သစ်တောကဏ္ဍတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းကို အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ VPA ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန်သဘော တူညီခဲ့သည့် သစ်တင်ပို့သည့် နိုင်ငံအများအပြားတွင်ပြည်သူများအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သည့် လုပ်ငန်း စဉ်မျိုးမရှိခဲ့ဖူးပါ။
သဘောတူညီချက်သည် ယုံကြည်မှုရှိလာရေးသေချာစေရန် VPA ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ခြင်းများတွင် ကျယ်ပြန့်သော အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းကို EU မှ အကြံပြုထောက်ခံပါသည်။ ထို့အပြင် VPAs များသည် သူတို့၏သက်တမ်းကြာမြင့်မှု၊ အမျိုးသားမူဝါဒ၊ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေး နှင့် အဆင့်မြင့်နိုင်ငံရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ အကျုံးဝင်မှုတို့ကြောင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အခြားစီမံကိန်းများနှင့် ကွဲပြားပါသည်။
အလွှာစုံမှအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်ခြင်းအတွက် VPA ကဖန်တီးပေးသည့်အခွင့်အရေးသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပို၍ခိုင်မာလာသည်။ အကယ်၍ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် လုပ်ငန်းစဉ် အတွက် သတင်းအချက်အလက်နှင့် တန်ဖိုးရှိသည်များသယ်ဆောင်လာပါက အစိုးရက ၎င်းတို့ကိုမိတ်ဖက်များ အဖြစ် ပို၍ပို၍မြင်လာသည်။ သို့ရာတွင် အစပထမ၌ အဓိကအကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူအုပ်စုတစ်ခုချင်းသည် အောက်ပါ စိန်ခေါ်မှုများ ကြုံတွေ့ရသည်။ ။
VPA လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုသည် ခြားနားသောအစီအစဉ်ရှိသည့် မတူညီသောဝန်ကြီးဌာနများကို သက်ရောက်ပါဝင်စေပြီး ၎င်းဝန်ကြီးဌာနများအကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးသည် လွယ်ကူခြင်း မရှိပါ။
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားလေ့မရှိပဲ VPA လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်သည့် ကာလကြာရှည်အစည်းအဝေးများတွင် နှစ်မြှပ်ထားခြင်းမှရရှိလာ သည့် စီးပွားရေးတန်ဖိုးကို အမြဲလိုလိုသိမြင်မှုမရှိပါ။
အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့၏ ကွဲပြားခြားနားနေသောအကျိုးစီးပွားများကို ဖော်ပြရန် ရုန်းကန် ရနိုင်ပြီးမကြာခဏဆိုသလို အစိုးရများနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများက ၎င်းတို့ကို ပြဿနာ အဖွဲ့များအဖြစ်ရှုမြင် တတ်သည်။
VPA လုပ်ငန်းစဉ်၏ ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်းအဆင့်တွင် ပါဝင်ခြင်း
သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံသည် EU နှင့် VPA ဆွေးနွေးပွဲများမစတင်မီ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ အကြားတွင် VPA လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ထောက်ခံသည့် အများဆန္ဒသဘောတူညီချက်ရှိရန် သေချာရမည်။ အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများအကြား အများဆန္ဒရရှိရန် ၎င်းတို့ကို သတင်းပေးအကြောင်းကြားရန် အသေအချာ လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းက အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် VPA သည်၎င်းတို့အတွက် မည်သည်တို့ကို လုပ်ပေးနိုင်သည်နှင့် ၎င်းတို့ အကျိုးစီးပွားများအတွက် မည်သို့ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်သနည်း အပြင် VPA က ၎င်းတို့ထံမှ မည်သည်တို့ကို လိုအပ်ဖွယ်ရှိသည်တို့ကို နားလည်ထားရန် လိုအပ်သည် ဟုဆိုလိုပါသည်။
အစိုးရ အေဂျင်စီများ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် သစ်ကုန်သွယ်ရေးအသင်းကဲ့သို့ စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားသော အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်အဖွဲ့များသည် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်သတင်းပေးရန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဦးစီးဆောင်ရွက် ရနိုင်သည်။ EU အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အခြားသော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများသည် ၎င်းလှုပ်ရှားမှုများ အတွက် ထောက်ပံ့မှုများမကြာခဏပေးပါသည်။ ထောက်ပံ့မှုများကို အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ ပြည်သူလူထု ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် မီဒီယာမှတဆင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ် သက်သူများရှိသည့် နေရာများအထိ သတင်း ပေးခြင်းများ စသည်ပုံစံတို့ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက် သူများဖော်ထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်း များသည် ပါဝင်ခြင်းကို အားကောင်းစေသည် ("အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများဖော်ထုတ်ခြင်း" လေးထောင့်ကွက်တွင် ကြည့်ပါ)။
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများဖော်ထုတ်ခြင်းသည် မူဝါဒ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်က မည်သူတို့ကို သက်ရောက်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကိုမည်သူတို့ကသက်ရောက်စေနိုင်သည်ကို ကူညီဖော်ထုတ်နိုင် သည့် လက်နက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သက်ရောက်ခံရမည့်သူများမှာ အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ဌာနများ၊ ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တစ်လျှောက်လုံးရှိ အကြီးစား နှင့် အသေးစားပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ၊ အရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ နှင့် ရပ်ရွာလူမှုအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်။
ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများသည် စားပွဲပေါ်တွင်လေ့လာမှုများ၊ သစ်တောကဏ္ဍမှတိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့် သက်ရောက်နေသည့်အဖွဲ့များထံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းများ နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်းများပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများက ဆွေးနွေးပြီး ရလဒ်များကိုစစ်ဆေးသည့် အစည်းအဝေးများလည်းပါဝင်နိုင်ပါသည်။ VPA လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုတွင် အစိုးရများနှင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူအဖွဲ့များသည် ပါဝင်သင့်သည့်အကျိုး ဆက်စပ် ပတ်သက်သူများ နှင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူအဖွဲ့များအပြင် ၎င်းတို့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ထောက်ကူရန် လိုအပ်သည့် အထောက်အပံ့ကို ကူညီဖော်ထုတ်ရန် ဖော်ထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းကို မကြာခဏ အသုံးပြုပါသည်။
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းသည် VPA လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းသည် ပါဝင်ခြင်း အခွင့်အရေးကိုလည်း ပိတ်သွားစေနိုင်ပါသည်။
အရေးကြီးသည့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများကို ချန်ရစ်ခဲ့လျှင် မပြည့်စုံပါ။
အစိုးရများသည် ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ဖော်ထုတ်ခြင်းပြုလုပ်ထားသည့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူ အဖွဲ့များ နှင့် အတူတကွ လုပ်ကိုင်မည့်အစား အထက်မှအောက်သို့အမိန့်ပေးသည့် အလေ့ အကျင့် ဖြင့် သာ စီမံအုပ်ချုပ်သည်။
အစိုးရများသည် ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရသော လုပ်ငန်းစဉ်ထက် ပုံသေနှင့် အပြီး အပြတ်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်သဘောထားသည်။
VPA ဆွေးနွေးပွဲများတွင် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်ခြင်းသည် EU နှင့် မိတ်ဖက်နိုင်ငံတို့မှ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ထောက်ခံမှုရသည့်သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ အဆိုပါ ကျယ်ပြန့်သော ထောက်ခံမှုသည် ထိရောက်သော အကောင်အထည်ဖော်မှုကို လွယ်ကူချောမောစေပါသည်။
ယနေ့အထိ VPA လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ဆွေးနွေးပွဲအဆင့်တွင် အစိုးရအများစုသည် VPA မှ သက်ရောက်နိုင်မည့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၊ VPA အား အကောင်အထည်ဖော်မည့် အကျိုး ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် VPA တွင်အကျိုးရှိနေသည့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပါဝင်စေ သည့်ပြည်သူများပါဝင်သော ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ်ကို ဖော်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲစီစဉ်ရန် မိတ်ဖက်နိုင်ငံရှိ အစိုးရတွင်တာဝန်ရှိသော်လည်း အကျိုးဆက်စပ်ပတ် သက်သည့်အဖွဲ့တစ်ခုစီသည် ၎င်းတို့အချင်းချင်း အကြားထဲတွင် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲ စီစဉ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများဖော်ထုတ်ခြင်းသည် ဆက်စပ်သောအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ အားလုံး ပါဝင်ရေးသေချာစေရန် ကျယ်ပြန့်စွာပါဝင်လာခြင်းကို ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။("အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများ ဖော်ထုတ်ခြင်း"တွင်ကြည့်ပါ)။ အတွေ့အကြုံက အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခြင်းသည် (ကိုယ်စားလှယ်များအကြား) တုံ့ပြန်မှုကောင်းလေလေ အဖြေများပိုမိုရရှိ လေလေဖြစ်ပြီး ကိစ္စရပ်များတွင် အများဆန္ဒကို ရရှိရန်ပိုမိုမြန်ဆန် လေလေဖြစ်သည်ဟုပြသနေပါသည်။ ထို့ကြောင့်အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများ ပါဝင်ခြင်းသည် VPA ၏ လက်တွေ့လုပ်နိုင်စွမ်း နှင့်ယုံကြည်ရမှုကို အားကောင်းစေပြီး နိုင်ငံပိုင်ဖြစ်မှုကို သေချာစေလျက် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွင်တိုး တက်ကောင်းမွန်မှုများကို လှုံ့ဆော်ပေးပါသည်။
VPA ဆွေးနွေးခြင်းများသည် ပါဝင်ခြင်းကိုမြှင့်တင်ပေးရန် အခွင့်အရေးများစွာဖန်တီးပေးသည်။ ဥပမာ တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခြင်းများသည် မတူကွဲပြားသော အကျိုးစီးပွားများကို ဆွေးနွေးပွဲစားပွဲဝိုင်းဆီသို့ယူဆောင်လာပါသည်။ VPA စာသားနှင့် နောက်ဆက် တွဲများ ပုံပေါ်လာသည်နှင့်အမျှ အကောင်အထည်ဖော်သည့်အဆင့်တွင် ပါဝင်ခြင်းကို ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ် စေရန် ကတိကဝတ်များကို သူတို့ကထည့်သွင်းပေါင်းစပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
သို့ရာတွင် အစိုးရများသည် အလွှာစုံမှအကျိုးဆက်စပ်သူများပါဝင်သည့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများနှင့် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများကို ၎င်းတို့၏အမြင်မျှဝေစေနိုင်ရန် ထောက်ကူသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရန်မှာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်အဖြစ် တွေ့ရှိရနိုင်ပါသည်။
မတူညီသောနိုင်ငံများသည် ခြားနားသောချဉ်းကပ်နည်းများအသုံးပြုကြသည်။ ဗီယက်နမ်တွင် အစိုးရသည် အလေးထားစရာကိစ္စရပ်များကို စုစည်းရန်ကျယ်ပြန့်သော ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ လိုင်ဘေးရီးယားတွင် လူ့အဖွဲ့အစည်းများကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရုံသာမက အမျိုးသား အဆင့် ဆွေးနွေးပွဲ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများတွင်နေရာပါပေးခဲ့ကြသည်။ ဟွန်ဒူးရပ်စ်တွင် ဒေသအဆင့် အလွှာစုံမှအကျိုးဆက်စပ် သူများ၏ကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများသည် အမျိုးသားအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲများကို ထည့်သွင်းပံ့ပိုးပေးပါသည်။
အတွေ့အကြုံက အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်အဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များကို ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရန်အရေးကြီးသည်ဟုပြသပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်စားပြုနယ် အတွက် တာဝန်ခံရမည်။ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူကိုယ်စားလှယ်များသည် သူတို့၏ကိုယ် စားပြုနယ် များ နှင့် ဆွေးနွေးမှုများမှရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များမျှဝေခြင်းနှင့် သူတို့၏ ကိုယ်စားပြုနယ် များမှ အမြင်များကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲများတွင် ထည့်သွင်းပံ့ပိုးခြင်းဆိုင်ရာ ထိရောက်သောနည်းလမ်းများ လိုအပ်သည်။
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်နိုင်ရန် VPA လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုသည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက် သူများ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနားလည်ရန်နှင့် ထိရောက်စွာပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရန်လိုအပ် သည့်အချိန်၊ ကျွမ်းကျင်မှု များ၊ ငွေကြေးနှင့် အခြား သယံဇာတများကဲ့သို့သော အရေးကြီးသည့်ကိစ္စရပ်များကိုစဉ်းစားရမည်။ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူ များ၏ကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပုံများသည် အောက်ပါတို့တွင် ထောက်ပံ့မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့ လိုအပ်နိုင် သည်။
ကျေးလက်နှင့်ရောက်ရန်ခက်ခဲသည့် ကိုယ်စားပြုနယ်များအပါအဝင် ကျယ်ပြန့်သောအကျိုး ဆက်စပ် ပတ်သက်သူများအကြား ပညာပေးခြင်းနှင့် နိုးကြားသည့် အသိမြှင့်တင်ခြင်း
နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် ဉပဒေရေးရာသတင်းအချက်အလက်များကို ဘာသာစကားများ၊ သုတနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာနောက်ခံများစသည်တို့ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြု၍ ပြည်သူလူထုသို့သိစေခြင်း
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူအချို့သည် ကောင်းမွန်စွာဖွဲ့စည်းထားပြီး သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနေသော် လည်း မကြာခဏဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အသေးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းများကဲ့သို့သော အခြားအကျိုး ဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်အဖွဲ့များမှာ ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။ သာဓကအားဖြင့် Tropenbos International မှ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတကွန်ဂိုနိုင်ငံတွင် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည့်စစ်တမ်းအရ ၉ဝ% သော အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် VPA ဆွေးနွေးပွဲများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်းကို မသိရှိခဲ့ကြပါ။ ၎င်းကိစ္စအားကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် Tropenbos International သည် ဒေသခံအစိုးရများ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ လက်မှုပစ္စည်းထုတ်ရန်အတွက် သစ်ခုတ်သူများနှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် လက်မှုပစ္စည်းထုတ်ရန်အတွက် သစ်ခုတ်ခြင်း နှင့် VPAနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်သည့်သင်တန်းကိုစီစဉ်ပေးခဲ့သည်။
VPA လုပ်ငန်းစဉ်၏ အကောင်အထည်ဖော်သည့်အဆင့်တွင်ပါဝင်ခြင်း
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအတွက် VPA ၏အကောင်အထည်ဖော်သည့်အဆင့်တွင်ပါဝင်ရန်မှာ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခြင်းအဆင့်တွင်ပါဝင်သကဲ့သို့အရေးကြီးပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော်သည့်အဆင့်တွင် ပါဝင်ခြင်းသည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည်သဘောတူညီချက်အား ရိုးရိုးတန်းတန်းလိုက် နာခြင်းထက် သဘောတူညီ ချက်အားမည်သို့အကောင်အထည်ဖော်သနည်းတွင် ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိခြင်းဖြစ် သည်ဟုဆိုလိုပါသည်။ အကောင် အထည်ဖော်သည့်အဆင့်တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ် သက်သူများသည် တိုးတက်မှုကို အမြဲသိရှိနေပြီး အောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာကို တိုးတက်ကောင်းမွန် လာစေလျက် ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည့် ကိစ္စရပ်များတွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
သို့ရာတွင် VPA လုပ်ငန်းစဉ်သည် ဆွေးနွေးခြင်းမှအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသို့ ပြောင်းလဲသောအခါ ပါဝင်ခြင်း လျော့နည်းသွားလေ့ရှိသည်မှာဖြစ်နေကျကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ နှစ်ဖက်အဖွဲ့များမှ သဘောတူ ညီချက်အား အတည်ပြုလက်မှတ်ထိုးပြီးသည့်နောက်ပိုင်းမှသာ VPA ပူးတွဲအကောင်အ ထည်ဖော်ရေး ကော်မတီကို တည်ထောင် သည့်အတွက်ကြောင့် တစ်စိတ်တစ် ဒေသအားဖြင့်ပါဝင်မှု လျော့ကျသွား နိုင်ပါသည်။ ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းသည် ဆွေးနွေးခြင်းပြီးဆုံးပြီး နောက်ပိုင်း အချိန်အတော်ကြာနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် VPA ဆွေးနွေးခြင်းအဆင့်ရှိဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ လုပ်ဆောင်ချက်များအားမကြာခဏဆော်သြစည်းရုံးသည့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပါဝင်သောဆွေးနွေးပွဲများသည် အကောင် အထည်ဖော်သည့်အဆင့်တွင် အကြိမ်ရေနည်းပါးလာသည်။ ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရာတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုအား ဖြေရှင်းရန်အတွက် EU နှင့် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံသည် ဆွေးနွေးပွဲများပြီးပြီးချင်း ယာယီပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ယာယီ ကော်မတီသည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအားဆော်သြစည်းရုံးရန်နှင့် တရားဝင်အစည်းအဝေးများ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
VPAs များ၏စာသားနှင့် နောက်ဆက်တွဲများသည် ရှိနေသည့်အကျိုးဆက် စပ်ပတ်သက် သူများပါဝင်ခြင်းကို ၎င်းတို့က ချိတ်တွယ်ထားသည့်အတိုင်းအတာအပေါ် မူတည်၍ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အားလုံးက ဤအချက်ကိုမှီငြမ်းပါသည်။ အသေးစိတ်အဆင့်သည် ပါဝင်ခြင်း အတိုင်းအတာ ကိုမကန့်သတ်ဘဲ အကောင်အထည် ဖော်သည့်အဆင့်အထိ ဆက်လက်ပါဝင်လိမ့်မည်ဟု နှစ်ဖက်စလုံးမှ အ ကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအကြား တွင်မျှော်လင့်ချက်ရှိပါသည်။
VPA တစ်ခုစီသည် အဓိကစာသား၏ပိုဒ်ခွဲတစ်ခုတွင် ရှိနေသည့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ် သက်သူများ ပါဝင်ခြင်းကို အသားပေးထားပြီး နောက်ထပ်အသေးစိတ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို ကြီးကြပ်ခြင်း နှင့် စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရာတွင် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ၏ အခန်းကဏ္ဍများကိုဖော်ပြထားသည့် ၄င်း၏နောက်ဆက်တွဲများတွင်နောက်ထပ်အသေးစိတ်ကိုပေးထားပါသည်။ အခန်းကဏ္ဍများတွင်လွတ်လပ် သောစာရင်းစစ်များအတွက် သတင်းအရင်းအမြစ်များ သို့မဟုတ် လွတ်လပ်သည့်စောင့်ကြည့် လေ့လာသူ များအနေဖြင့် အမျိုးသားအဆင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများ နှင့် ပူးတွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီများတွင်ပါဝင်ခြင်းကိုထည့်သွင်းထား နိုင်ပါသည်။
VPA တစ်ခုစီက VPA အကောင်အထည်ဖော်သည့်အဆင့်တွင် EU သည် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူ များနှင့် ပုံမှန်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲများကျင်းပမည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ပုံမှန်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခြင်းများသည် သတင်းအချက် အလက်ရယူရန်အခွင့်အလမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ပြည်သူလူထု ပါဝင်မှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင်မျှတမှုရှိရန် အခွင့်အလမ်းတို့နှင့်ပတ် သက်သည့် ၁၉၉၈ခုနှစ် အေအားဟတ်စ်သဘောတူညီချက် အရ EU ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။
ဂါနာနိုင်ငံတွင် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများသည် အမျိုးသားအဆင့် VPA ဉီးဆောင်ကော်မတီတွင် အစပိုင်း၌ ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသောအခါမှ အစိုးရက ကော်မတီတွင် ၎င်းတို့အတွက် နေရာဖန်တီးပေးခဲ့ပါသည်။ VPA လုပ်ငန်းစဉ် ဆက်လက်လုပ် ဆောင်နေစဉ် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့များသည် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် မူကြမ်းရေးဆွဲခြင်း၊ ဂါနာနိုင်ငံ၏ ကွန်ပြူတာစနစ်သုံး သစ်ခြေရာခံစနစ် ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် VPA မှ ဖန်တီးသည့် ဥပဒေရေးရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများတွင် အရေးကြီးသည့် အခန်းကဏ္ဍများ မှ ပါဝင်ခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားတွင် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်သော ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းများသည် တရားဝင်သစ် ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်အစီအစဉ် နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုအတွက်မဆို ယခုအခါစံဖြစ်လာခဲ့သည်။ သာဓကအားဖြင့် VPA ပူးတွဲ အကဲဖြတ်ခြင်းမှထွက်ပေါ်လာသည့် အမျိုးသားအဆင့်စည်းမျဉ်းများ၏ နောက်ဆုံးပုံစံတွင် ဒေသအတွင်း ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲ ၄ ခုနှင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူ ၃ဝဝ ပါဝင်သော အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲတစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းများပြီးနောက်တွင် အလွှာစုံ မှ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်းပြုစုရေးကော်မတီက ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့် စာရင်းစစ်များသည် စနစ်ပိုမို ကောင်းမွန်လာစေရန် အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် အင်ဒိုနီးရှား အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများသည် VPA လုပ်ငန်းစဉ်အားငါးနှစ်ကြာခြေရာခံရန် ကိုယ်စားလှယ် ၇ ယောက်ကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီး ၎င်းကိုယ်စားလှယ်များ အတွက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ကွန်ယက်သို့ သတင်းပေးရန် နည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၇ ယောက်ထဲမှ ၁ ယောက်သည် VPA ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်သည့် ကော်မတီတွင် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။
လိုင်ဘေးရီးယားတွင် အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများသည် VPA ဆွေးနွေးခြင်း စားပွဲဝိုင်းတွင် လူမှုအဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်ရေးအတွက်နေရာ တောင်းဆိုခဲ့ သည်။ ထိုတောင်း ဆိုချက်၏ ရလဒ် အဖြစ်အရပ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် နေရာ ၇ နေရာနှင့် အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့များ အတွက် နေရာ ၄ နေရာ ရရှိခဲ့သည်။ ကိုယ်စားလှယ်များသည် သတင်းအချက်အလက်များကို ရပ်ရွာ အခြေပြုလူထုအဖွဲ့အစည်းများ သို့ ပြန်လည်အကြောင်းကြားရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများမှ သတင်း အချက်အလက်များကို စေ့စပ်ဆွေးနွေးသူ များထံသို့ အကြောင်းကြားရန် စနစ်များကိုထွက်ပေါ် စေခဲ့ပါသည်။
သဘောထား။ ဂါနာ၏ VPA လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည့် Obed Owusu-Addai
ကျွန်တော်တို့ဟာ ဂါနာသစ်တောများကို စီမံအုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရ၊ လုပ်ငန်းနှင့် ယခုအခါ စားပွဲဝိုင်း ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ ဒီတော့ FLEGT ဟာ ဂါနာမှာ ကျွန်တော်တို့ အတွက် အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့တွေရဲ့ သဘောထားအမြင်ကပေါ့ဗျာ။ အချိန်တိုအတွင်းမှာ ဒီစနစ်က အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကို ပါဝင်လာ စေပြီး စနစ်သည် အားကောင်းလာလိမ့် မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ အဲဒီလို ပါဝင်လာစေဖို့ကို အရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းတွေသာမကပဲ ဂါနာ ရပ်ရွာလူထုကပါ ဂါနာသစ်တောကဏ္ဍ အုပ်ချုပ် လုပ်ကိုင်ခြင်းတွင် ပါဝင်လာဖို့တကယ်ပဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီး ဖြစ်လာဖို့ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ တချို့ အပြောင်းအလဲတွေက အခုကတည်းက ဖြစ်ပေါ် နေတာ တွေတွေ့မြင်နေရပါပြီ။ ဒါဟာကောင်းပါတယ်။အနာဂတ်ဟာ အလွန်ကောင်းမွန်လာမှာပါ။
"Obed Owusu-Addai သည် Forest Watch Ghana ၏ အစီအစဉ်မှူးဖြစ်ပြီး Civic Resonse တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ရင်းမြစ်။ ။ EU FLEGT Facility အင်တာဗျူး ၂ဝ၁၄
VPA မှ ကောင်းမွန်သော သစ်တောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို မည်ကဲ့သို့ မြှင့်တင်ပေးနိုင်သနည်း
VPA မှ တာဝန်ခံမှုကို မည်ကဲ့သို့ တိုးမြှင့်စေနိုင်သနည်း